A Wanderer's Notebook: September 2008
မိုင်တိုင် အမှတ် (၁၉) !!!!
သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ မကျွေးလိုက်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် စိတ်မကောင်းပါ ၊ ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ပါတယ် ။ (အဲ ... သဘောကျရင်တော့ Little India က Banana Leaf မှာ သွားလွေးကျပါ ဟိ) ... အဲ စားထား သောက်ထားတာတွေကိုလည်း သွားရေကျနိုင်ပါတယ် .... ခင်ဗျား ၊
Anyway ! HAPPPY 19th BIRTHDAY "Aung Phyoe" !!!!!!!!!!!!!!!! :)
( Celebrating Birthday)
(Spicy Indian Food on Banana Leafe)
(မြန်မာ ဆန်ဆန် အားပါးတရ နဲ့ မကြီးဆု ... ဟိဟိဟိ)
( Mike ၊ ဇေယျာဝေလင်း နဲ့မူလေး )
(သက်ဝေလင်း ၊ ဇင်မွန်တို့နဲ့ ... )
( Birthday Cake)
( ချီး .... ဟား (စ်) ....... )
(ဇေယျာ ၊ မူလေး ၊ ဆုဝေ တို့နဲ့ အတူ ....love u all ^0^ )
( ခပ်မိုက်မိုက်ပဲ ဟေ့ ! အုန်းသီး နဲ့ ဘုန်းကြီး ... သက်ဝေလင်း )
( မူ...........လေး ! )
( ဇင်မွန် နဲ့ Mike !!!! )
( အပြန် ဆိုင်က မြန်မာ အမနဲ့ အမှတ်တရ ..... )
( Tnx for all , for our lovingly memories !)
Posted by Aung Phyoe at 19:463comments: Links to this post
“လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ ၁၉ နှစ်ပြည့်ပြီးလို့ ရှိရင် Teenage မဟုတ်တော့ဘူး ။ လူကြီးဖြစ်ပြီ …”
သည်လိုပြောတဲ့ စကားတွေ ၊ စာတွေကို ကြားဖူး ဖတ်ဖူးခဲ့တာကြာပြီ ။ ဒါပေမယ့် ကျတော့်အတွက်တော့ မွေးနေ့ဆိုတာ သတ်မှတ်ချက် ဂဏန်း သင်္ကေတ တစ်ခု သာဖြစ်နေဆဲ ။ နောက်ပြီး နောက်ကြောင်းပြန် ဆင်ခြင်တွေးတော မိတဲ့နေ့တစ်နေ့ မျှသာပေါ့ ။ သည်လိုနဲ့ ဘ၀ရဲ့ မှတ်တိုင်တော်တော်လေးကို ခပ်မြန်မြန်ကျော်ဖြတ် ခဲ့မိပြီ ။ ခုတော့ မှတ်တိုင် ၁၉ တိုင်မြောက်ကို ဖြစ်ကျော်ရပြီ ။ လူကြီးဘ၀ရဲ့ တာလွှတ်မှတ်တိုင် အစပေါ့ ။ သည်မွေးနေ့ မှာလည်း သာမန်ထူးမခြားနားပါဘဲ ။ အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားသော်လည်း ကာယ ၊ ဥာဏ အားဖြင့် သိသိသာသာကြီး ကြီးထွားရင့်ကျက်သွားစေဖို့ မဖြစ်နိုင် ။ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားရမည် ။ သည်လိုအခါတိုင်းမှာ ဖြစ်သန်းခဲ့ရသမျှ မွေးနေ့တွေထဲက ပထမဦးဆုံး မွေးနေ့အကြောင်း ပြောပြတတ်တဲ့ အမေ့အသံကို ကြားယောင်မိသည် ။
၁၉၈၉- ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက် အညာနေ့လည်ခင်း ။ အမေပြောတတ်လွန်းသဖြင့် ပူအိုက်တဲ့ သည်နေ့လည် ခင်းဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ကြာ ကျတော့်အတွေးအာရုံဝယ် ပုံရိပ်ထင်ဆဲ ။ မြို့ဆေးရုံဝင်ပေါက် သို့ ဦးတိုက်လာနေတဲ့ အမေ ၊ အဖေနဲ့ အဘွားတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ နာကျင်မှု ၊ ၀မ်းမြောက်မှု မှာမဆိုစလောက်ရောစွက်နေတဲ့ ပူပန်ကြောင့်ကြမှုကြောင့် မြန်ဆန်တတ်ကြွနေခဲ့ကြသည် ။ မှတ်မှတ်ရရ အမေ့စကားကြောင့် အဲသည်နေ့ခင်းတုန်းက အမေ့ကို ဆိုက်ကားပေါ်မှာတင်ပြီးနောက်က သမီးယောက္ခမနှစ်ယောက် စက်ဘီးတစ်စင်းနဲ့ လာကြရတာတဲ့
ဆေးရုံကိုရောက်တော့မှ နာလှတယ်လို့ တညည်းတည်း ညည်းနေတဲ့ အမေ့ကို ထမီစိမ်းဝတ် သူနာပြုက မှတ်တမ်းတွေနဲ့ မွေးခန်းထဲကို တန်းခေါ်သွားခဲ့တာ ။ “တော်တော်နဲ့တော့ မွေးလိမ့်အုံး မထင်ဘူး” လို့ အဘွားတို့ကို ခပ်တိုးတိုးပြောသွားတော့ လူနာစောင့်တွေခမျာ မွေးခန်းဝမှာ ပြူတစ်ပြူတစ်လုပ်ရင်း မွေးလူနာ အခြေအနေကို အကဲခတ်ကြရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်နာရီပြီးတစ်နာရီသာ ကြာသွားတယ် အမေ့ခမျာ မမွေးနိုင်သေးဘူး ။ သားဦးအပျိုဗိုက်လည်းဖြစ်ပြန် ၊ နောက် အသက်ကြီးမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တော့ ညနေ (၄) နာရီကျော်ကျော်ထိ မွေးမယ့်အရိပ်ယောင်မပြသေးဘူး ။ အဘွားခမျာလည်း ဆေးရုံစင်းကြံမှာ ဒေါင်းတောက်အောင်လျှောက်ရင်း ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ရိုးရာတွေရော ၊ ဘုရားစာတွေရော ရွတ်နေတာစုံနေတာဆိုပဲ ။ မွေးခန်းဝမှာ ရပ်ပြီး ပါးစပ်လှုပ်ပြ ကိုယ်ဟန်အမူအယာနဲ့ အခြေအနေမေးနေရှာတဲ့ အဖေ့ကိုလည်း ခေါင်းငြိမ့် လက်ခါလုပ်ပြရင်း (ပါးစပ်ကလည်း တညည်းတည်းညည်းရင်း) အမေ့မှာ ချွေးတွေထဲနစ်နေရှာတယ် ။
“အဲသည်တုန်းကများ အမေ့မှာ နာလို့ သည်းလိုက်ရတာများ သားရယ် ။ သားဦးကလည်းဖြစ် နောက်အသက်ကလည်း ၃၆ ကျော်နေတော့ အတော့်ကို မွေးရခက်ခဲ့တာ”
အဲသည်အချိန်တုန်းက နာကျင်မှုတွေ ညည်းညူမှုတွေနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့ အပြုံးမျိုးဖြင့် အမေပြန်ပြောတတ်တယ် ။ ဘာတဲ့ … ။ သိပ်ကိုခံရခက်တဲ့ နာနည်းမျိုးတဲ့ ။ ဗိုက်ကနာတာဆို ဘယ်နာနည်းမျိုးနဲ့မှ မတူဘူးတဲ့ ။ တစ်ခုခု ခိုက်မိလို့ နာကျင်တိုင်း ငိုတတ်တဲ့ ကျတော်ကို အမေပြောတတ်တဲ့ စကားလုံး တွေ …. ။
နောက်ညနေ ၅နာရီ မတ်တင်းလောက်ကျတော့ အတော်ကြီးကို ဗိုက်ကနာလာတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်း မှောင်မည်းသွားပြီး အမေ့စိတ်ထဲမှာ ဗိုက်နာတာတစ်ခုပဲ မှတ်မှတ်ရရစွဲနေတယ် ။ နောက်ဆရာဝန်ရောက်လာပြီး ဆရာမကြီးနဲ့အတူ လိုအပ်တာ စစ်ဆေးပေးကြတယ် ။
“မွေးတော့မယ် ဆရာမရေ မကြာဘူး ၊ အခန်းဝက လူနာစောင့်တွေ အပြင်ထွက်တော့”
သူနာပြုဆရာမဟာ အမေ့ကိုပြောရင်း အဖေတို့ကိုပါလှည့်ကြည့်ပြီး မွေးခန်းလိုက်ကာ ကိုဆွဲပိတ်လိုက်တယ် ။ နောက်တော့ အော်တဲ့သူက အော် ၊ တွန်းတဲ့သူက တွန်း ၊ ညှစ်တဲ့သူက ညှစ်၊ အားပေးတဲ့ သူက အားပေး ၊ ဆုတောင်းတဲ့သူက ဆုတောင်း ၊ စိတ်ပူတဲ့သူက စိတ်ပူရင်း နဲ့ပဲ (၅) နာရီ (၁၅) မိနစ်ကျော်ကျော်မှာ “အူဝဲ” ဆိုတဲ့ အသံလေးကိုကြားလိုက်ကြရတယ် ။
ကလေးအပြင်ရောက်တဲ့ အထိအမေက အော်နေတုန်းဆိုပဲ ။ “ယောက်ျားလေး ဆရာမရေ …. လုံးလုံးခဲခဲကြီးတော့” ဆိုတဲ့ အသံကိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲ ကြားလိုက်မိသား ။ နောက်တော့ ချက်ကြိုးဖြုတ် ၊ အညစ်အကြေးတွေ သုတ်သင်ပေးပြီး ကလေးကို အမေ့ဘေးခေါ်ပြသတဲ့ ။
“ကလေးကလေ အာခြစ်ပြီးငိုနေလိုက်တာ အရမ်းပဲ ။ ညိုညိုတုတ်တုတ်လေး ။ ဆံပင်လေးတွေဆို မည်းနေတာ ။”
ပထမဆုံး ကျတော့်ရုပ်သွင်ကို ရေးရေးတွေးကြည့်ရင်း လက်ရှိကျတော့်ကိုငေးကာ အမေပြောတတ်သည်။ နောက်တော့ တစ်လောကလုံး အေးချမ်းပြီး နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားတာကိုပဲ အမေကမှတ်မိတော့တယ် ဆို၏ ။
“ငါ့သားဟာ တနင်္ဂနွေသားလေး နောက်ဆံပင်လေးတွေလည်း ဖြောင့်ရှာတယ် ၊ ဒီတော့ လူကတော့ ဂဂျိုးဂဂျောင် ကောက်မှာပဲလို့ အဲသည်တုန်းကလည်းက အမေတွေးမိသား ။ မင်းအဖေတို့ ဆိုပျော်လိုက်တာကွာ ၊ မင်းအဘွားကတော့ မင်းအဘိုးကို သတိရရင်း ငိုရှာတယ် ….”
အမေက သည်လိုနိဂုံးချုပ်ရင်း ပြုံးနေတတ်သည် ။ အမေ့ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာတော့ မျက်ရည်တို့ ဝှေ့ရီလျက် ။ ဒဏ္ဍာရီထဲက သူရဲကောင်းတစ်ဦးရဲ့ ဖွားမြင်ခန်းကို ပြန်ပြောင်းဂုဏ်ယူ နေသည့်ဟန်မျိုး ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ထို ညနေခင်းလေးရဲ့ အကြောင်းဟာ ကျတော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်သဖွယ် စိတ်အာရုံတွင် စွဲဝင်နေခဲ့ပြီ ။
ကြာခဲ့ပါပြီ ။ ကျတော်ကို ချစ်တဲ့ အဘွားလည်း ကျတော်တို့ကို ထားရစ်ခဲ့ပြီ။ နောက်အဖေ ၊ အမေ တို့ကလည်း ကျတော်နဲ့ အဝေးတစ်နေရာမှာ ။ ဒါပေမယ့် မွေးနေ့တွေရောက်တိုင်း ထိုညနေခင်းလေးကို ပြန်ပြောင်းသတိရတတ်တာ တော့ အမြဲလိုလိုပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်နဲ့ တစ်ချိန် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ မတူညီတတ်တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရဲ့ညနေခင်းတွေမှာတော့ ကျတော့်ရင်ဝယ် မိဘ ၊ ဘိုးဘွားတို့၏ မေတ္တာဖြင့်နွေးထွေးဆဲ ။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မွေးနေ့ပွဲကို ၀ှဲချီး မကျင်းပဖူးသော်လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးသူတို့ရဲ့ မေတ္တာဖြင့် လေးနက်ဆဲ ။
၁၉ နှစ်ကျော် ၂၀ ထဲဝင်ပြီး Teenage လည်းကုန် လူကြီးဘ၀ရောက်ပြီ ဆိုပေမယ့် အမေတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ (မိဘကို ကပ်ချွဲတတ်တဲ့) ကျတော်ဟာ အမြဲတမ်း ကလေးလေးပဲ မဟုတ်ဘူးလား ။ ။
(၂၄ ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈ ။ မွေးနေ့)
Posted by Aung Phyoe at 22:412comments: Links to this post
Labels: A bit personal, Memories, အထိမ်းအမှတ်စာ
Tag ထားကြတာ ကြာလှပေမယ့် ခရီးလွန်နေတော့ မရေးဖြစ်ပဲ ကြာနေတာပါ။ အန်တီငြိမ်းရော ဒေါ်ရွှေအိရော ရေးပြီနော် …. ။ အတတ်နိုင်ဆုံး အမှန်ဆုံးဖြေထားတာ … ။
ကိုယ့်ရဲ့နာမည် - အောင်ဖြိုး ။
ကိုယ်ကိုသူများတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် - ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက “အိုးဖြောင်” တဲ့ ။ တော်တော်များများတော့ နာမည်ရင်းပဲ ခေါ်ကြတယ် ။ လူကြီးတွေကျတော့ “ကိုဖြိုး” တဲ့ ။ အဲထူးထူးခြားခြားတော့ရှိတယ် (ဟိ) သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆို ကြည်နေရင် “အစ်ကို”တဲ့ ၊ စိတ်ဆိုးရင် “လင်းတ” တဲ့ ( အဲလောက်ကြီးလည်း ရုပ်မဆိုးပဲနဲ့ဗျာ) ၊ နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ “အောင်” တဲ့ (ဟိ) ။
ကိုယ်ဒီမှာနေတယ် - အာရှတိုက်ရဲ့ ကျွန်းသေးသေးလေး ။
ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်ချင်ရင် - မလိုလောက်ပါဘူးနော် … ။
အရောင်ဆိုရင် - အပြာရောင် ( အချစ်ရောင် ဆိုလား) ။
အ၀တ်အစားဆိုရင် - စိတ်မ၀င်စားဘူး ရှိတာပဲ ၀တ်တာ ။
အစားအစာဆိုရင် - မြန်မာထမင်းဟင်း ။ အထူးကတော့ မုန့်ဟင်းခါး ၊ ကော်ဖီ ။
ပစ္စည်းဆိုရင် - စာအုပ် ။
သီချင်းဆိုရင် - မဟာဂီတက နေ Hip Hop ထိ ကိုယ်နဲ့ရင်ခုန်သံချင်းတူရင်ကြိုက် ။ ကိုစောငြိမ်း သီချင်းတွေကိုတော့ ထူးထူးခြားခြား ကြိုက် .... (ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ ၊ ပွင့်ဦး ၊ နွေနှောင်းရက်ကျန် ) နောက် (La vie en rose by Edith Piaf)
စာရေးဆရာ - အင်း….တော်တော့် ကိုများတယ် ။
စာအုပ် - ဒါက ပိုတောင်များသေး …. ။ အထူးကတော့ “Gone With The Wind” နဲ့ “ချစ်သူရေးတဲ့ ကျမရဲ့ညတွေ..”
Life style - ရိုးရိုးလေးနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀လေးမျိုးပေါ့ ။
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ - အမေနဲ့ အတူ အိမ်တွင်းကုပ်နေပြီး တစ်နေ့လုံးစာဖတ်ရတာ ။
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် - စာအုပ် (အရေးကြီး …. မွေးနေ့နီးနေပြီ)
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက - ဆုံးသွားတဲ့ အဖွား နောက် အမေ နဲ့ အဖေ ၊ အင်းနောက်တော့ … လာအုန်းမှားပေါ့ ?
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက - ဗုဒ္ဓ
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက - အတော်ခေါင်းစားရမဲ့ မေးခွန်းပဲ …. သူငယ်ချင်းအားလုံးလိုလိုကို ခင်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက - ခုထိတော့ မရှိသေး ။
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက - မုန်းတဲ့သူတွေ အများကြီး ။
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် - အင်း…… ဒါလည်း အများကြီး ။
အကြောက်ဆုံးအချိန် - ခုထိတော့ဘာ ကိုကြောက်ရမယ်မှန်းမသိသေး ။
အမှတ်တရနေ့ - ၁၇ ဇူလိုင် (အဖွားဆုံးတဲ့နေ့) ၊ ၂၃ ရက် ဇူလိုင် ၊ ၁၁ သြဂုတ် ။
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် တောင်းမဲ့ဆု - အမေနဲ့ အသက်ထက်ဆုံး အတူတူနေသွားချင်တယ် ။
အချစ်ဆိုတာ - လူဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရကို ပြီးပြည့်စုံစေတဲ့ ခံစားချက် ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ရင်နင့်ရတောင် အချစ်ဟာ ပြည့်စုံပြီး လူသားဆန်တဲ့ ခံစားမှုပါ ။
အမုန်းဆိုတာ - ပူလောင်ပြီး ၊ မိမိကိုယ်တိုင် အမုန်းကြောင့် ဝေဒနာ ခံစားစေတတ်တယ် ။
အလွမ်းဆိုတာ - တစ်ခါတစ်ရံ မရှိမဖြစ်လိုလို လာတတ်တဲ့ ဆွတ်ပျံ့မှု ။
သံယောဇဉ်ဆိုတာ - ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ နှောင်ကြိုး ။
ဘ၀ဆိုတာ - အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ထိန်းညှိနိုင်မှ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ တစ်သက်တာ ခရီးဝင်္ကပါ ။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ- ကိုယ့်အပေါ် အများဆုံးနာလည်ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေ ။
ချစ်သူဆိုတာ - ကိုယ့်ကို ရင်ခုန် တမ်းတစေတဲ့လူ ။ နောက် အတူတူရှိချိန်ဆို အားလုံးကိုမေ့ပြီး အပျော်ကြီးပျော်နေအောင် ပြုစားနိုင်တဲ့လူ ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီလိုထင်တယ် - သာမန်လူငယ်တစ်ယောက် ။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က - မနာလိုဝန်တိုချင်း ကင်းနိုင်အမျှကင်းအောင် ကြိုးစားမယ် ။
အပြောချင်ဆုံးစကားတစ်ခွန်း - လောကမှာ “မုဒိတာ” တရားထားနိုင်တဲ့လူဟာ အငြိမ်းချမ်းဆုံးပဲ ။
နောက်ကျတာ ကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ ။ မဟုတ်ကဟုတ်က ဆုတောင်းကြီးကိုလည်း ကျေပါစေ ။ Tag ရမယ့်လူလည်းမရှိလောက်တော့ဘူးနော် … !
Posted by Aung Phyoe at 11:082comments: Links to this post
Labels: Personal Favorites, Tag